Ny olana ara-dalàna tsara indrindra amin'ny bilaogy | Martech Zone
Talata, Jolay 14, 2020 Sabotsy, Janoary 2, 2021 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay, ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nanoratra lahatsoratra bilaogy tsara ary nitady sary tsara aseho miaraka aminy izy ireo. Nampiasa ny fikarohana sary Google izy ireo, nahita sary iray voasivana tsy misy andriana, ary nanampy an'io tamin'ny lahatsoratra.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, nifandray tamina orinasan-tsary lehibe izy ireo ary notolorana vola mitentina $ 3,000 handoavana ny fampiasana sary ary hialana amin'ny olana ara-dalàna mifandraika amin'ny fanenjehana azy ireo noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Io olana io no nahatonga antsika hisoratra anarana DepositPhotos ho an'ny sary tsy andoavam-bola avo lenta sy avo lenta.
Na orinasa miaraka amin'ny bilaogy ianao na, manana bilaogy manokana fotsiny dia tsy miova ireo olana. Mazava ho azy, amin'ny bilaogin'ny orinasa dia afaka miloka ianao fa ny zotom-pon'ny fanenjehana dia mety ho somary mahery vaika kokoa ary ho henjana kokoa ny sazy. Ny olana telo voalohany momba ny lalàna sy ny adidy atrehin'ny bilaogera dia:
Fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona - ny fampiasana ny asa arovan'ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona tsy misy alalana, manitsakitsaka ny zony manokana natokana ho an'ny tompon'ny zon'ny mpamorona, toy ny zo hamerina, hizara, hampiseho na hanao ilay asa arovana, na hanao asa namboarina.
ny fanalam-baraka - ny fifandraisana amin'ny fanambarana diso izay manimba ny lazan'ny olona iray, orinasa, vokatra, vondrona, governemanta, fivavahana, na firenena. Ho fanalam-baraka, amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy diso ny fangatahana iray ary efa natao tamin'olona hafa fa tsy ilay olona nalam-baraka.
Fanitsakitsahana CAN-SPAM - CAN-SPAM dia ny fitsipiky ny Etazonia manoratra hafatra mailaka ara-barotra. Ny fandikan-dalàna dia mitentina hatrany amin'ny $ 16,000! Vakio ny: Inona ny lalàna CAN-SPAM?
Ity infographic, Blog Law 101, avy ao amin'ny Monder Law Group no manoratra ireo olana lehibe momba ny lalàna sy ny trosa mifandray amin'ny bilaogy ary koa ny fomba hialana amin'izy ireo.
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpiara-miasa izahay DepositPhotos amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fitorahana bilaogyara-dalàna ny fanaovana bilaogyCan-amin'ny spamfandikana ny kopiany fanalam-barakaDMCAlalànaara-dalànaandraikitraamin'ny spam
15 Jul 2016 amin'ny 1:56 PM
Misaotra anao amin'ity lahatsoratra ity! Fampahalalana tena ilaina sy amin'ny an-tsipiriany ho an'ireo izay mikasa ny manomboka bilaogy, ary tsy izany ihany. Raha ny amiko dia zava-dehibe ny fahalalana lalàna na dia vaovao aza ny sehatra ho anao ('Ignorantia non est argumentum')